Georgi L. Kapchits
The Way, Mosko, 2002
ISBN: 5-86748-072-0 - Suugaan
Hubsiimo hal baa la siistaa waxaa ku qoran maahmaahaha Soomaaliyeed kuwa ugu caansan oo lagu ogaaday aqoonbaadhis uu Dr. G. Kapchits ku sameeyey ammintii u dhexaysey 1998-2001dii, beelaha Soomaaliyeed ee deggen Jarmalka iyo Denmark.
Dr. Georgi Kapchits wuxuu dhashay 1939 kii. Sannadkii 1967 wuxuu ka qalin-jebiyey Istituutka lagu barto afafka Aasiya iyo Afrika ee ka tirsan Jaamacadda Moosko. Takhasuskiisu waa af-yaqaan u go'ay af-amxaariga iyo af-soomaali-ga.1967kii ilaa 1994 wuxuu ka shaqeeyey qaybta Soomaaliga ee idaacadda Moosko. Sannadkii 2000 kii ayuu difaacay PhD uu ka diyaariyey afsoomaaliga. Maahmaah kasta waxa ku ladhan hal-tebinteedii oo Af-ingiriisiya. Faahfaahin dheeraad ah meeshii u baahanna waa lagu daray. Hordhaca buugga waxaa lagu soo bandhigay ujeeddooyinka iyo hababkii baadhitaanka loo sameeyey, habka kala sooca maahmaahaha iyo qaadaadhig ku saabsan sawraca suugaanta Soomaaliyeed.
Akhriste - 2005-10-07 03:18:35
Qoraaga - 2004-09-04 13:10:54
hassan - hassan_mas@hotmail.com
salaamu caleeku salaan kadib iga raalinoqda dhinaca faalada waayo faalo waxaa ka weyn dadka abaabulay oona isku daba riday mooqacaan quruxda badan waad mahad santihiin midda kale waxaan u baahnaa buugaagtaan qaarkooda ee ii soo sheega meesha aan kaheli karo iyo qarashkooda ii soo dira katalooj ku qoron qiimaha bugaagta iyo magacyadooda siday u dhanyihinba maahadsanidiin
Qoraaga - 2003-12-30 05:22:05
abdirahman maxamed cisman - xaaji_2004@hotmail.com
hubsiimo halbaa la siistaa
Qoraaga - 2003-12-30 05:19:35
waa dagal aduunayadu laba ay ku darsta waayahuna laba dabaq oo kala durugsan weeyaan